Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Turkiga | Gaaloos.com
Home » News » Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Turkiga
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Turkiga
Madaxweyne Maxamed Cabdulahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dalka Turkiga ayaa la kulmay maanta guddoomiyaha baarlamaanka Turkiga Ismail Kahraman iyagoo ka wadahadlay xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Turkiga.
Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan Baarlmaanka Turkiga iyo xubnaha wafdiga ku wehelinaya madaxweyne Farmajo booqashada uu ku tegey dalka Turkiga.
Madaxweyne Farmajo ayaa ugaga mahadceliyay dowlada Turkiga howlaha kala duwan ee ay ku taageerto dalka Soomaaliya waxana uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin shacabka Soomaaliyeed gargaarka ay marwalba la garab taagan yihiin dowlada Turkiga walalahooda Soomaaliyeed.
Kulankan kadib ayuu Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhigay ubax beerta nasashada ee lagu maamuuso hogaamiyihii weynaa ee aasaasay dowlada Turkiga Ataturk.
Madaxweyne Farmajo oo ay tahay booqashada uu ku tegey dalka Turkiga tii ugu horeysay ee uu ku tago tan iyo markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu la kulmo Madaxweyne Ordegan waxaana la rajeynayaa in ay kala saxiixdaan heshiisyo.
Title: Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Turkiga
Posted by Unknown, Published at 2:42 AM and have 0 comments